Ciidamada Aminga Jubbaland oo gacanta ku dhigay waxyaabaha qarxa - Muqdisho Online
Home Wararka Ciidamada Aminga Jubbaland oo gacanta ku dhigay waxyaabaha qarxa
Ciidamada Aminga Jubbaland oo gacanta ku dhigay waxyaabaha qarxa
Ciidamanka Amaanka ee Jubbaland ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen miinooyin iyo walxaha qarxa oo la doonayo in lala beegsada shacabka iyo madaxada Jubbland. Ciidanka ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay qabteen kuwaas oo lagu tuhmayo in kooxda in Al-shabaab ay ku aaseen goobo ku yaalla Gobolka Jubbada Hoose.
Ciidamanka amaanka Jubbaland ayaa sheegay in Miinooyinka nooca dhulka lagu aaso ka soo saaray inta u dhaxeysa tuuloyinka Bangeeni iyo Koban,kuwaasi oo ay sheegeen in la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka. Sidoo kale halka Miinooyinka laga soo saaray ayaa waxaa ah aaga degmada Jammaame Gobolka Jubadda Hoose,halkaas oo Saldhigyo ay ku leeyihiin Ciidamo ka tirsan dowlad Goboleedka Jubbaland iyo kuwa Xoogga dalka.
Dowlada Goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu qabtaa ciidamo si gaar ahaan u tababaran ka hortaga walxaha Qarxa una taagan mar walba ka hortaga weerarada Al-Shabaab ayaa ka soo saaray Miinoyinkan goobo ay Al-Shabaab geliyeen oo ah inta udhaxeysa tuuloyinka Bangeeni iyo Koban Waa aaga degmadda Jammaame Gobolka Jubadda Hoose”ayaa lagu yiri War ka soo baxay Taliska NISA Jubbaland.
Previous articleCiidamada Maraykanka oo duqayn ka gaystay Gobolka Sh. Hoose
Next articleWabiga Jowhar oo laga baqayo in uu fataho